UPVC rusvingo Panel T1110 - China hubei Shengyu Building Materials
Shengyu uPVC rusvingo panelt ane pfungwa itsva rusvingo cladding kuvakwa. Zvinonzi kugadzirwa 3 rukoko co-extrusion michina. Hazvina yakaoma, Zvinokosha zvakaisvonaka mune ruvara uye lightweight, kupfuura simbi uye kwakakurudzira papepa. Zvinotokosha zvikuru, hauzombofi ngura mukati rinorema indasitiri Park. UPVC rusvingo yedu remadziro ndiyo husingakwanisi acids, notumwe uye mwando pamwe vakakurumbira unhu. It anoramba akatsiga mukuita zvokunyama -40ºC kuna 80ºC. Anti-ngura chokupika uPVC rusvingo paneeli zvakakodzera zvikuru applic ...
FOB Price: 2.99-7.99 / mativi mamita
Shengyu uPVC rusvingo panelt ane pfungwa itsva rusvingo cladding kuvakwa. Zvinonzi kugadzirwa 3 rukoko co-extrusion michina. Hazvina yakaoma, Zvinokosha zvakaisvonaka mune ruvara uye lightweight, kupfuura simbi uye kwakakurudzira papepa. Zvinotokosha zvikuru, hauzombofi ngura mukati rinorema indasitiri Park.
UPVC rusvingo yedu remadziro ndiyo husingakwanisi acids, notumwe uye mwando pamwe vakakurumbira unhu. It anoramba akatsiga mukuita zvokunyama -40ºC kuna 80ºC.
Anti-ngura chokupika uPVC rusvingo paneeli zvakakodzera mafomu zvikuru kumahombekombe dzinodiwa zvikuru munyu bvungapfunga ngura, uye kunzvimbo zvakaoma. nemhepo yakasviba, kunyanya mu makemikari maindasitiri mapazi.
1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm 1110mm 1050mm 800mm sezvo Required 3.2-6.0KG / ㎡ vaima White, Blue
Next: FRP daylighting papepa TT980
Fiber Roof ukomba
Washington City Offices Greenhouse ukomba
Washington City Offices Insulation ukomba
Washington City Offices Light ukomba
Washington City Offices Plastic ukomba
Washington City Offices Roof ukomba
Frp Insulated ukomba
Frp ukomba For Sale
Frp Wall ukomba
Glass Roof ukomba Price
Greenhouse Magorovhosi ukomba
Greenhouse Roof ukomba
Insulated Roof ukomba
Opaque Washington City Offices ukomba
Plastic Roof ukomba
PVC denga ukomba
Translucent Corrugated Roof ukomba
Translucent Washington City Offices Roof ukomba
Transparent Washington City Offices Roofing ukomba
Transparent Roof ukomba
Chakaita zvokugadzirwa Asa nebwe denga jira RY720-A